ईस्टर मा यात्रा गर्न बीमा बाहिर को लाभहरु | यात्रा समाचार
ईस्टर मा यात्रा बीमा भाडाको फाइदाहरू
पक्कै पनि तपाईं एक लामो समय को लागी अर्को पछाडि को लागी केहि पनि चीज बनाउन तयार हुनुहुन्छ। पूरा समय र कामबाट टाढा केहि दिन विच्छेदन गर्न अब समय आयो। तपाईंसँग पहिले नै सबै छ: टिकटहरू, सुटकेसहरू र भ्रम, तर तपाईंले बिर्सनु हुँदैन इस्टरको समयमा यात्रा गर्न बीमा लिनुहोस्.
किनकि धेरै चोटि हामी अत्यन्तै आवश्यक छुटाउँदछौं। साथै, एक मा उच्च मौसम यो इस्टरको रूपमा, सबै चीजलाई राम्रोसँग बाँधेर राख्नु राम्रो हुन्छ ताकि हामी आफैंमा रमाइलो गर्ने बारेमा मात्र सोच्न सक्दछौं। तसर्थ, यो सबै सुविधाहरू सम्झन लायक छ, जो कम छैन, यात्रा बीमा लिने को। के तपाईं तिनीहरूलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
1 यात्रा बीमा खरीद गर्दा चिकित्सा सहयोग
2 यो भन्दा पहिले एक दिनको लागि यात्रा रद्द
3 तपाईले यात्रा बीमा गरेर समय र पैसा बचाउनुहुनेछ
4 ईस्टरमा देखा पर्ने सामान्य घटनाहरू के हुन्?
यात्रा बीमा खरीद गर्दा चिकित्सा सहयोग
यो स्पष्ट छ कि जब हामी यात्रामा जान्छौं हामी यो कसरी खराब हुन सक्छ भनेर सोच्दैनौं, तर यसको विपरीत। तर यो सत्य हो कि हामी चाहँदैनौं पनि, ती ती चीजहरू हुन् जुन एक्लै आउँदछन्। यसैले सबै भन्दा राम्रो कुरा हामी सक्रिय हो। कुन तरिकामा? राम्रोसँग कभर गरिएको छ। यसैले, यात्रा बीमा लिनुहोस् जब हामी हाम्रो सीमानाबाट टाढा हुन्छौं तब हामीलाई चिकित्सा सहयोग प्रदान गर्दछ। यसैले, तपाईको खर्चमा उत्तम स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, तपाई के खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चिन्ता नगरिकन। तसर्थ, बजारमा अवस्थित विभिन्न नीतिहरूलाई धन्यवाद, हामी केवल हाम्रो छनौट को एक छनौट गर्नुपर्नेछ।
यो भन्दा पहिले एक दिनको लागि यात्रा रद्द
यो यात्रा बीमा लिनको लागि आउँदा हामीसँग हुने फाइदाहरूमध्ये एक हो। यद्यपि हामीसँग सबै भ्रमहरू छन् जुन हामीले माथि उल्लेख गर्यौं, यो पनि सत्य हो कि अप्रत्याशित घटनाहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यसकारण, दुबै काम र स्वास्थ्य कारणहरूले तपाईंलाई आफैंमा राम्रो छुट पाउन नसक्ने बनाउँदछ। तर यदि तपाईं रद्द बीमा छ, तब तपाईं यो जान्न अझ बढी सहज हुनेछ यसभन्दा पहिले एक दिनसम्म यात्रा रद्द गर्न सकिन्छ, तपाइँको पैसा गुमाए बिना। त्यहाँ धेरै बीमाहरू छन् जसले तपाईंलाई कभर गर्दछ यदि कुनै खास कारणका लागि, तपाईं यात्रामा जानुहुन्छ तर चाँडै फर्कनु पर्छ।
तपाईले यात्रा बीमा गरेर समय र पैसा बचाउनुहुनेछ
यो सत्य हो कि मूल्य तपाईं बीमा को लागी भुक्तान गर्न लागेका छन्यो तपाइँ लिने यात्रा मा पनि निर्भर गर्दछ। तर अझै पनि, यो सँधै भुक्तान हुनेछ जबदेखि हामी एक विशेष समयको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। थप रूपमा, तपाईंले सोच्नुपर्दछ कि यदि हामी स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्छौं जुन हामी छुट्टीमा हुँदा, एक चिकित्सकको भ्रमण बीमा बिना दोगुना महँगो हुन सक्छ। कहिलेकाँहि हामी सोच्छौं कि स्वास्थ्य बीमा संग हामीसँग पहिले नै सबै थोक छ। तर जबकि यो प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्दछ, यात्रा बीमाको साथ हामी केवल हाम्रो छुट्टीको आवश्यक समयको लागि मात्र यसलाई गर्छौं।
त्यस्तै प्रकारले, पछिल्लाले अन्य प्रकारका घटनाहरू सामना गर्नुपर्नेछ र चिकित्सा मात्र होइन। पछि यातायात समस्याहरू, सामानको साथै आवासको साथ र रद्द गर्दछ जुन हामीलाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सक्दछ। केवल छुट्टीका दिनहरू आफैंको कारणले होइन तर आर्थिक कवच को कारणले गर्दा यो लाग्न सक्छ जब हामी समावेश गर्दैनौं। त्यसकारण पैसा बचत धेरै बढी छ। जबकि हामी पनि समय बचत गर्नेछौं, कलको साथ, हामीसँग सबै आवश्यक जानकारी हुनेछ।
ईस्टरमा देखा पर्ने सामान्य घटनाहरू के हुन्?
त्यहाँ धेरै विस्थापनहरू छन् जुन इस्टरमा हुन्छन्। तसर्थ, त्यहाँ अर्को मौसम भन्दा सधैं अधिक घटनाहरु हुन सक्छ। केहि धेरै सामान्य हुन सक्छ:
हाम्रो यात्रा रद्द गर्न को लागी स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि। दुबै बिरामी र अप्रत्याशित दुर्घटनाहरूको कारण।
सामानको घाटा। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले सोचे भन्दा प्राय: हुने गर्छ। त्यहाँ केहि चोरी वा नोक्सान र नोक्सान हुन सक्छ।
उडानहरू रद्द ढिलाइका साथसाथै, तिनीहरू पनि इस्टरमा वा जब हामी बिदा सुरु गर्न लागेका छौं प्रायः अरू नै प्रायः कारणहरू हुन सक्छन्।
यी सबै र अधिकको लागि, ट्राभल बीमा लिनले हामीलाई मद्दत गर्दछ। किनभने यदि त्यहाँ कुनै रद्द छ भने तिनीहरूले रकम फिर्ता गर्नेछन्। त्यस्तै प्रकारले यसले सामान र सबै प्रकारका समस्याहरूलाई पनि कभर गर्दछ, चिकित्सा सहयोग, जुन हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं। यी सबैको लागि, हामी के चाहन्छौं सँधै शान्त रहनु र हाम्रो पछाडि कभर गरिएको छ ताकि कुनै प्रकारको अचम्म नहोस्। र तपाइँ? तपाईसँग पहिले नै छ? ईस्टर मा यात्रा बीमा?.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » ईस्टर मा यात्रा बीमा भाडाको फाइदाहरू
इजिप्टमा अबु सिम्बल भ्रमण गर्नुहोस्